WARBIXIN: Carlos Tevez oo xaqiijiyey in kooxda Chelsea ay isku dayayso saxiixiisa… (Miyuu ku biirayaa Blues?) – Gool FM
(Buenos Aires) 26 Luuliyo 2016 – Carlos Tevez ayaa xaqiijiyey in kooxda kubadda cagta Chelsea ay isaga cayrsanayso xagaagan, iyadoo la og yahay in weeraryahanka reer Argentine uu dhawaan dib ugu laabtay dalkiisa hooyo kuna biiray kooxda Boca Juniors, kaddib markii uu ka tagay Juventus xagaagii hore.
Waxaa la fahansiin waayey in 32-sano jirkaan uu dib ugu soo laabto qaaradda Yurub xagaagan, iyadoo uu miiska saarnaa heshiis qaali ah.
Guddoomiyaha kooxda West Ham David Sullivan ayaa daaha ka qaaday inay isku dayeen inay la soo saxiixdaan weeraryahankaan, laakiin heshiiska waxaa burburiyay dalabaadkiisa mushaar.
Tevez ayaa ka soo hoos ciyaaray tababare Antonio Conte waqtigoodii Juventus, waxaana jiray warar tababaraha reer Talyaani uu isugu dayayey inuu dib ula midoobo Tevez oo ay ka wada xamaashaan kooxda Blues.
Weeraryahanka ayaana xaqiijiyey inay xiriir wada hadal ah dhexmaray isaga ciyaaryahan ahaan iyo kooxda Chelsea, laakiin Tevez ma doonayo inuu dib ugu laabto Yurub.
“Waan ku wanaagsanahay Boca, xaqiiqdii fikrad ahaanteyda riyadeydu waa inaan xirfaddeyda ciyaareed ku soo afjaro kooxdaan cajiibka ah” ayuu Tevez u sheegay Corriere dello Sport.
“Yurub? Haa waa run Napoli iyo Chelsea way i doon doonayaan, laakiin waxaan ku celiyey wixii aan horay u iri, waxaan jeclaan lahaan inaan sii joogo Boca ilaa aan ka fariisanayo cayaaraha.”
Luciano Vietto oo iska diiday inuu ka hadlo wararka la xiriirinaya Barcelona